ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကို | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
အပေါ် Posted 15.09.2019 19.09.2019
ယနေ့မိဘများစွာသည်တတိယကလေး၏မိခင်အရင်းအနှီးကိုမည်သူ၊ မည်သူ့ထံနှင့်မည်သည့်အခြေအနေတွင်ပေးအပ်သည်ကိုစိတ်ဝင်စားနေကြသည်။ ဤဆောင်းပါး၌သင်လိုအပ်သောအချက်အလက်အားလုံးကိုလေ့လာလိမ့်မည်။ "မိခင်အရင်းအနှီး" ၏အယူအဆ? ဒီနေ့ ...
ပြည်တော်ပြန်ဆိုတာဘာလဲ မည်သူပြန်ပို့ခွင့်ရှိသနည်း။ မည်သို့ပြုလုပ်မည်နည်း။
အပေါ် Posted 15.09.2019 20.09.2019
ပြည်တော်ပြန်ဟူသောဝေါဟာရကိုနိုင်ငံရေးနှင့်စီးပွားရေးလောကတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုထားသည်။ မည်သည့်အသုံးအနှုန်းများနှင့်မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်၎င်းကိုအများဆုံးတွေ့ရသနည်း။ “ နေရပ်ပြန်ပို့ခြင်း” ဟူသောစကားလုံး၏အဓိပ္ပာယ်ယေဘုယျအားဖြင့်၊ “ ပြန်ပို့ခြင်း” သည်ပြန်လာခြင်းဖြစ်သည်။
မွေးစားမိသားစု - ကဘာလဲ? တရားဝင်လယ်ပြင်၌မွေးစားမိသားစုကဘာလဲ?
အပေါ် Posted 15.09.2019 21.09.2019
အကြောင်းရင်းများစွာကြောင့်ယနေ့ကလေးများစွာသည်မိဘစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကင်းမဲ့နေကြသည်။ ကလေးများလုံခြုံမှုရှိစေရန်အမိုးအကာများ၏ ၀ န်ထမ်းအားလုံးကလုပ်ပေးသည်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမှအမေနဲ့အဖေကိုအစားထိုးလို့မရဘူး။
အိုင်ယာလန်နိုင်ငံသည်အမျိုးသားလွတ်လပ်ရေးအခွင့်အရေးအတွက်ရုန်းကန်နေရသောကာလကြာရှည်စွာတည်ရှိနေသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ပြင်းထန်သောဆွေးနွေးမှုသည်ယနေ့တိုင်အောင်မရပ်ပါ။ ထို့ကြောင့်အိုင်ယာလန်အလံနှင့်၎င်း၏အခြားသင်္ကေတများမှာအတော်လေးဖြစ်နိုင်သည်။
အပေါ် Posted 15.09.2019 16.09.2019
လုံခြုံစိတ်ချရမှုနှင့်အလုပ်သမားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆိုသည်မှာ ၀ န်ထမ်းများ၏ကျန်းမာရေးနှင့်အသက်ကိုကာကွယ်ရန်ရည်ရွယ်သည့်လိုအပ်ချက်များနှင့်ဆောင်ရွက်ချက်များဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း၊ ကုသခြင်းနှင့်ကာကွယ်ခြင်း၊ ဥပဒေရေးရာ၊ စည်းရုံးခြင်း၊ တစ်ခု ...
အပေါ် Posted 15.09.2019 23.09.2019
ရှေးအကျဆုံးပြည်နယ်တစ်ခုမှာတရုတ်ဖြစ်သည်။ ဒီကနေ့လူအများမြင်သာသောအရာများစွာသည်ဤနိုင်ငံမှလာသည် - ဥပမာ၊ ပိုး၊ ဖုန်နှင့်စက္ကူ။ သမိုင်းကြောင်းအရအလံကိုပထမဆုံးအသုံးပြုခဲ့သည့်တရုတ်သည်တရုတ်ဖြစ်သည်ဟု ...
ဆွဲဆောင်မှု - ဤ ... ဖျေါပွခကျြ, အမျိုးအစားများနှင့်အကျပ်ကိုင်
လူတစ် ဦး သည်အချို့သောအရာများကိုမလုပ်လိုသည့်အခါအကျပ်ကိုင်ခြင်းသည်ကျဆင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့သောလုပ်ရပ်များသည်လူတို့အားမလိုလားအပ်သော (သို့) လက်မခံနိုင်သည့်အချိန်များသို့အတင်းအဓမ္မစေခိုင်းနိုင်သည်။
တရားမဝင်အပြုအမူ - ဤအရာသည်မည်သည့်လက္ခဏာများဖြင့်တရားမဝင်အပြုအမူကိုဆုံးဖြတ်သည်
တရားမဝင်အပြုအမူ - ရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်သည့်အတွက်လူ့လုပ်ရပ်များဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အခြို့သောအခွအေနေတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးရမည်ဖြစ်သည်။ အမည် - လူတစ်ယောက်သည်သူ၏လုပ်ရပ်များကိုအပြည့်အ ၀ သတိပြုရုံသာမကဘဲ ...
အရွယ်ရောက်သူတိုင်းသိတဲ့အတိုင်းငါဘာကြောင့်ရှေ့နေလိုအပ်သလဲ။ ဤသည်သည်ဥပမာအားဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှု၊ အဖွဲ့အစည်းအမျိုးမျိုးတွင်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ခွင့်၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ရန်ခွင့်ပြုချက်ကိုအတည်ပြုသောစာရွက်စာတမ်းဖြစ်သည်။ အခြားသူများက ...
အနာဂတ်ယာဉ်မောင်းကိုယ်စားလှယ်လောင်းများသည်သင်တန်းမစခင်ကားမောင်းသည့်ကျောင်းအတွက်မည်သည့်အကူအညီလိုအပ်သည်ကိုရှာဖွေလိမ့်မည်။ ဒါကဆေးဘက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းတစ်ခုပါ။ ကားမောင်းရန်ကျောင်းအတွက်ဆေးစစ်ရန်လိုအပ်သည်။
အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ဘ ၀ တွင်ကလေးမွေးဖွားခြင်းသည်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကိုယ်ဝန်ရရန်ကံကောင်းပါကအလုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သောမေးခွန်းများစွာရှိသည်။ အထူးသဖြင့်အရေးအကြီးဆုံးအချက်တစ်ခုမှာအဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်သည်။
မှတ်ချက်များနှင့်အတူရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏အလုပ်သမား Code ကို၏ 136 ဆောင်းပါး
၀ န်ထမ်းများအားလစာမည်မျှတိတိပေးသည်ကိုအလုပ်သမားကျင့်ထုံးဥပဒေ (အထူးသဖြင့် 136 ဆောင်းပါး) တွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ ဤမေးခွန်းကိုစည်းနှောင်ထားသောသဘောသဘာဝများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ အလုပ်ရှင်ကသူ့အလုပ်သမားတွေကိုငွေထုတ်ပေးရုံသာမကဘဲ ...
ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံသားဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံသားခံယူခြင်း - စာရွက်စာတမ်းများ၊ ကုန်ကျစရိတ်
အပေါ် Posted 15.09.2019 17.10.2019
ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်သည်ဥရောပနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ရန်ဆန္ဒရှိသူများအတွက်အလွန်ကောင်းသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရိုမေးနီးယားသည်ဥရောပသမဂ္ဂ၏အသင်း ၀ င်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်၎င်း၏ဘာသာရပ်များအားဗီဇာမရှိပဲဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသည်။
ကိန်းဂဏန်းများအရ ၅ မိနစ်တိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့တိုင်းပြည်တွင်မီးလောင်နေသည်။ တစ်နာရီလျှင်လူတစ်ယောက်မီးထဲ၌သေဆုံးပြီးနှစ်ဆယ်ခန့်သည်ပြင်းထန်သောဒဏ်ရာများနှင့်မီးလောင်ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့သည်။ မီးလောင်မှု၏အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ ...
ယနေ့ခေတ်တွင်သူတို့သည်ကမ္ဘာနှင့်တစ်နိုင်ငံချင်းစီတွင်လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုကိုနှိုးဆွရန်အကြောင်းများစွာပြောကြသည်။ ပြည်နယ်ဥပဒေပြုအဖွဲ့များသည်သူတို့၏ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေများကိုအစဉ်တစိုက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်၊
ပြစ်မှုဆိုင်ရာကဘာလဲ? ပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုအမျိုးအစားများ။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှု၏ Tasks ကို
အပေါ် Posted 15.09.2019 30.12.2019
ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်ပြည်နယ်သည်မဆိုလူ့အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းမှုပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်အရေးကြီးသောလူမှုရေးအရအရေးပါမှုရှိသည်။ အဓိကတစ်ခုမှာလူ့အဖွဲ့အစည်း၊ နိုင်ငံတော်နှင့်နိုင်ငံသားတိုင်းကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံတွင်အုပ်ချုပ်မှုပုံစံတစ်ခုမှာအဘယ်နည်း။ အယူအဆနှင့်အမျိုးအစားများ, ခေတ်သစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ဥပမာ
ဒီမိုကရေစီသည်လူ့အဖွဲ့အစည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အမြင့်ဆုံးပုံစံဖြစ်သည်။ ဘုံကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အကျိုးစီးပွားများ၏ကျေနပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုလူထုကိုယ်တိုင် စုပေါင်း၍ ဆုံးဖြတ်သည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်းသည်သာလျှင်အာဏာရှိသောတရားဝင်အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ ခေါင်းဆောင်များကိုရွေးကောက်တင်မြှောက်သည်။
ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏ဥပဒေနှင့်အညီဖြစ်ရပ်များဆက်နွယ်မှုကိုရာဇ ၀ တ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရာတွင်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်ဖြစ်ရပ်အချို့သို့မဟုတ်အခြေအနေများနှင့်တရားမ ၀ င်သောလုပ်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်အရေးမယူမှု၏နောက်ဆုံးရလဒ်အကြားဆက်စပ်မှုဖြစ်သည်။ ဒါ ...
3 နှစ်အနည်းငယ်ရှိသောတိုက်ခန်းတစ်ခန်းကိုရောင်းခြင်း။ တိုက်ခန်းများဝယ်ယူခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်း။ တိုက်ခန်းရောင်းရန်
သင်သိသည့်အတိုင်းလူတစ် ဦး ချင်းစီမှတိုက်ခန်းများရောင်းရငွေမှ ၀ င်ငွေသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ၀ င်ငွေခွန် - ၀ င်ငွေခွန်။ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းရှိအိမ်ယာများကို ၀ ယ်ယူခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းကိစ္စများတွင်အားလုံးသည်ရုရှားသို့ပေးရသည်။
FSB သည်တန်ပြန်ထောက်လှမ်းရေးနှင့်ထောက်လှမ်းရေးလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်သည့်အပြင်ရာဇ ၀ တ်မှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုများကိုတိုက်ဖျက်သည့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ် ၁၈ နှစ်ကြာတည်ရှိခဲ့သည်။ သူမရဲ့ကျော်ကြားတဲ့ယခင် - Cheka, NKVD, KGB, သူနှင့်သူမထံမှ ...
စာမျက်နှာ 1 စာမျက်နှာ2... စာမျက်နှာ 150 Next ကို 's Page
17 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,467 စက္ကန့်ကျော် Generate ။